क्रियाशील विवाद समाधान भयाे भनिएकाे छ, तर अन्योल कायम छ
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस बाँके​​का सभापति किरण कोइराला​लाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
हामी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छौँ । हामी क्रियाशील विवादमा धेरै अल्झियौँ । म पनि काठमाडौंमा दुई दिनसम्म रहेर यही विषयका छलफलमा सरिक भएँ । यसमा धेरै विवाद थिए । हामीलाई केन्द्रले दिएको विधिअनुसार वडाले नै क्रियाशीलको निर्णय गर्ने भनिएको थियो ।
त्यसपछि वडा हुँदै गाउँ÷नगर, क्षेत्र जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्म जानपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो शतप्रतिशत नगरी मनपरितन्त्र भयो । केन्द्रले नै फारम दिने काम हुन थाल्यो । विधान मिचेपछि जिल्ला सभापतिहरु पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बस्नुभएको छ । हामीहरुको अनशन नै जारी छ ।
१८ गतेका लागि वडा अधिवेशन तोकिएको छ, तर सक्रिय सदस्यता नपुग्दा अन्योल देखिएको छ । कति मान्छेले अनावश्यक रुपमा विधिभन्दा बाहिर गएर प्रवेश पाइरहेका छन् । यो करेक्सन नभई महाधिवेशन हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रस्ट भनाइ नेतृत्वसामु छ । निर्वाचन केका आधारमा गर्ने ? आफ्ना मान्छेका लागि गर्ने ?
पार्टीमा युवाको आवश्यकता छ । युवाहरु अब पार्टीमा आउनैपर्छ । त्यसका लागि युवाको लाइन सुरु भइसकेको छ । अहिले जति पनि नेतृत्ववर्गलाई हामीले भनेका छौँ, तपाईंहरु छरिएर हैन, एकजुट भएर एकजनाको मात्र नाम दिनुस् ।
यदि नेतृत्वले हाम्रो भनाइ नसुन्ने हो भने बाध्य भएर हामीले पनि केही सोच्नैपर्छ । यदि नेतृत्व नै छरिएर रहने हो भने हामी कसरी चल्ने ? ग्रास लेभलसम्म हामीले के भन्ने ? जब गुटैगुट छ भने त्यसमा लाग्नुहुँदैन ।
जबसम्म सक्रिय सदस्यता विधिअनुसार हुँदैन, त्यतिबेलासम्म समस्या समाधान हुँदैन । तल–तलसम्मका कमिटीलाई विधिमा बस्न भन्नका लागि पहिले उहाँहरु नै विधिमा बस्न पर्यो नि ! विधि मिचेर केन्द्रीय कार्यालबाट फारम दिने गर्दा समस्या भएको हो ।
यो कुरा नेतृत्वले सोचोस् । अहिले विधि र विधान मिच्दै हुनुहुन्छ । हामीले प्रस्ट भनेका छौँ, लामो इतिहास बोेकेको कांग्रेस पार्टी आफैँमा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यही अभ्यासलाई जोगाउन पार्टी कार्यालयमा जिल्ला सभापतिहरुले घेराबन्दी गरेका छन् । जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन यो घेराबन्दी जारी रहन्छ ।
पार्टीमा परिवारवादको समस्या छैन । यो कुरा म मान्दिनँ । सबै नेतृत्व आ–आफ्नो क्षमताले उठ्ने हो । परिवारवादमा पनि जनता वा कार्यकर्ताले पत्याउनुपर्छ । यदि जनताले पत्याउँदैन भने ऊ असफल भइहाल्छ । पत्याउँछ भने उसलाई परिवारसँग लगेर यी विषयहरु जोड्न हुँदैन ।
मुख्य समस्या त यतिबेला क्रियाशील विवादमा गएर अड्किएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वले यसको समाधान भएको भने पनि अझै अन्योल कायमै छ । सँगसँगै हामी अहिले प्रतिपक्षाट सत्तापक्षमा पुगेका छौँ । हामी जनताको जीवनस्तरसँग नजिकबाट गम्भीर हुुनुपर्छ । जनस्वास्थ्यको कुरा सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । बाढी पहिरो, कोरोनालगायतका समस्या नै छ । यो सबै समाधानका लागि नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
हाम्रो अधिवेशन समयमै हुनुपथ्र्यो । यति लामो समयसम्म नेतृत्वले अधिवेशन रोक्न हुन्नथ्यो । के–के कारणले यहाँसम्म आइपुगेको छ । नेतृत्व पंक्तिले बाढी–पहिरो, कोरोनालगायत कारण उत्पन्न समस्याबारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने भनेको थियो । निर्वाचनका लागि पनि समय लाग्छ । हामी हेर्दै छौँ, हाम्रो नेतृत्व पंक्तिले यी सबै कुरालाई कसरी समाधान गर्छ ।
प्रकाशित मिति : भदौ ९, २०७८ बुधबार २०:४१:२२, अन्तिम अपडेट : भदौ ९, २०७८ बुधबार २०:४३:१४